China plastic ụlọ plastic igbe maka eletriki Manufacturer na Supplier | Meste
Plastic akụkụ maka eletriki
Ngwa akụrụngwa ga-enwerịrị igbe plastik dị na mpụga iji nye ụlọ dị mkpa, iji dozie ma kpuchido mpaghara dị n'ime site na mpụga mmetụta. Igbe a ma ọ bụ ụlọ a na-akpụkarị ihe plastik. Anyị na-akpọ haplastic igbe-plastic ụlọ maka eletriki.
A na-ejikarị eletriki eletrik arụ ọrụ eletrik, nke a na-eji n'èzí ma ọ bụ na ọnọdụ dị elu na ọnọdụ ihu igwe ma ọ bụ n'okpuru ibu ọrụ. Ya mere, ụlọ igbe rọba-rọba maka eletriki ga-akwụsi ike ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi, na ihe ndị e ji mee ihe kwesịrị inwe ume zuru oke, ike, mkpuchi na ire ọkụ, yana arụmọrụ dị elu ma dị ala.
Kedu ihe bụ ngwa eletriki na ndụ, ọkachasị oriri nke ọkụ eletrik, ọkụ eletrik n'ime ụdị ike ndị ọzọ iji mee ihe, isi nzube ya bụ imeziwanye ndụ. Ọmụmaatụ: igwe ikuku, igwe na-asacha ya, igwe mmiri, osikapa, igwe na-agba ọkụ na ihe ndị ọzọ.
kedu atụmatụ nke ngwa eletriki
Na nkenke nkọwa, ngwa eletriki bụ nnukwu okwu nke ike oriri na ngwaahịa size nke dijitalụ electronic ngwaahịa. Ngwa ụlọ na ngwa ọfịs bụ ụdị isi eletriki abụọ dị mkpa. Volta eletriki nke ngwa eletriki dị elu. Ya mere, ngwa eletriki na mba dị iche iche nwere ụkpụrụ nchekwa dị elu eji eme ihe.
Ngwa eletriki na-ejikarị modul ọkọnọ ike, sistemụ njikwa, usoro na ụlọ. Allọ eletriki na igwe na-abụkarị akụkụ plastik na metal.
Footkwụ igwe ịhịa aka n'ụlọ
Air purifier plastic ụlọ
Obibi ụlọ plastik
Ebe obibi ikuku
Kedu otu esi eji emepụta igbe plastik plastic maka ngwa eletriki?
* Must ga-enwerịrị ihe ọmụma na ahụmịhe ndị a:
1. Ihe omuma na ihe omuma banyere imeputa igwe.
2. Ghọta iji ngwaahịa na ụkpụrụ ụlọ ọrụ.
3. Ghọta ngwongwo plastik na teknụzụ nhazi, njirimara ngwaike na teknụzụ nhazi.
4. Onye nwere nkà n'iji eserese eserese sọftụwia.
* Must ga-abụrịrị maara gburugburu ebe obibi na ihe achọrọ maka ụdị ngwaahịa a.
1. Ghọta ihe eji arụ ọrụ:
Ọ bụ maka ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí?
Achọrọ oke okpomọkụ na ọkụ ọkụ?
Enwere ihe mkpuchi eletriki ọ bụla, ihe mgbochi mgbochi, ma ọ bụ ọrụ ogologo oge na voltage dị elu, obere oge, ọkara ma ọ bụ gburugburu ebe obibi dị elu?
Achọrọ ka arụ ọrụ na oke okpomọkụ na iru mmiri mgbochi corrosion gburugburu ebe obibi?
Achọrọ ka arụ ọrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị ala dị ala karịa efu?
You chọrọ mgbochi radieshon?
Enwere ihe ọ bụla achọrọ maka nrụgide na nkwụsị nkwụsị?
Enwere ihe ọ bụla achọrọ maka nghọta ma ọ bụ mgbochi nghọta?
Enwere ihe ọ bụla achọrọ maka agba na-acha, gloss elu, ọka, plating, eserese na silk ebi akwụkwọ?
2. Chọrọ iji zute na ngwaahịa ihe owuwu chọrọ nke ngwaahịa?
Ma akụkụ ndị ahụ bụ shei, akụkụ na-akpụ akpụ, nkwado dị n'ime ma ọ bụ akụkụ eji achọ mma?
Enwere oke nkenke chọrọ maka nha na ọdịdị nke akụkụ?
Ma Akụkụ na-ebu Nnukwu Ọrụ?
Otu akụkụ ma ọ bụ ihe dịgasị iche iche?
Enwere ihe ọ bụla achọrọ maka dobe, ujo na esemokwu na ngwaahịa a?
Enwere akara na akara mmiri maka ngwaahịa?
Mmekọrịta mmekọrịta nke akụkụ na ngwaahịa
Mmekọrịta mmekọrịta n'etiti ngwaahịa na ngwaahịa ndị ọzọ
Industrykpụrụ ọrụ na ụkpụrụ nchekwa nke ngwaahịa ga-ezute
Kedu maka usoro nrụpụta nke igbe igbe plastic?
A na-emepụta akụkụ Ge site na ịkpụzi ọgwụ. Ọ gụnyere akụkụ abụọ
1. Ọgwụ ebu n'ichepụta
Nha na nkọwapụta nke ụdị ngwa eletriki niile dị iche iche, na usoro nke ebu na ebu dịkwa iche.
A. Maka nnukwu ohia, iji kwado njuputa ogwu ma nweta ezigbo ọdịdị, a na-eji mgbidi arụ ọrụ ma jiri ihe dị mma. A na-ejikarị ọnụ ụzọ ámá ndị na-ebu ọnụ ebu ibu ebu ebu. Maka akụkụ B. nke nwere oke oke mmiri, nke dị mkpa, nke gbara ọkpụrụkpụ, nke dị warara ma ọ bụ nke dara ogbenye, a na-eche ndị na-agba ọsọ na-anwụ anwụ. Iji meziwanye ọnọdụ ogwu ogwu, chekwaa oge ogwu ma nweta ezigbo mma.
C. Maka nkenke akụkụ ma ọ bụ akụkụ nwere ogo dị elu dị elu, a ga-ahọrọ nchara nwere oke anụ na nguzogide corrosion dị ka isi. A na-eji CNC dị elu, WEDM dị nwayọ na EDM na-arụ ọrụ iji rụọ ọrụ oghere.
D. maka akụkụ ndị nwere mgbakwunye dịka eriri iko na ọkụ ọkụ, a ga-eji ihe siri ike mee ihe mkpuchi ahụ.
E. Maka akụrụngwa nwere shrinkage dị ka nylon, POM na PP, a ga-ahazi oghere oghere n'ụzọ ziri ezi dịka ịda mbà.
F. Ezi uche nke ịhọrọ ihe. Die uji eze iyuzucha kwesịrị ezi uche na zuru ezu
2. Nlekọta maka akụkụ ịkpụzi ọgwụ
A: gbọmgbọm nke injection ịkpụzi igwe kwesịrị ịdị ọcha. Karịsịa maka akụkụ ndị nwere ihe ndị dị elu dị elu, ma e wezụga maka ngwakọta ọ bụla, adịghị ọcha na ifuru ihe onwunwe.
B. Enwere ike ilebara nlebara anya pụrụ iche na nkedo nkedo nke nnukwu shei
C. Maka akụkụ ndị nwere akara akara, a ga-ezere nrụrụ nke akụkụ, ma a ga-ezere nnukwu ego ma ọ bụ gluu dị ọcha iji kpochapụ ebe akara ahụ.
D. E nwere ogbe n'ihu njedebe, nkọ nkuku, egosipụta na cracks n'elu akụkụ na-arụ ọrụ n'okpuru elu nsogbu.
Kedu ụdị ihe plastik eji mee ihe maka ọkpọ plastik nke ngwa eletriki?
A na-ejikarị plastik ndị a na imepụta ihe mkpuchi plastik maka ngwa eletriki:
1. ABS, ABS / PC: a na-ejikarị ụdị abụọ a emepụta shells ma ọ bụ ihe mkpuchi nwere ezigbo mma.
2. PMMA, PC: abụọ ndị a ihe na-bụ-eji maka uzo panel na ìhè
3. Naịlọn, POM: a na-eji ha eme akụkụ nke usoro na-agagharị, dị ka gia, irighiri ikpuru, osisi na-agbanwe agbanwe, cranks na rollers ma ọ bụ wiil.
4. TPU, TPU: ha bụ ụdị resins abụọ, nke a na-ejikarị eme bọtịnụ ma ọ bụ mmiri na-enweghị mmiri site na ijikọta ha na ABS ma ọ bụ PC site na ịkpụzi mkpịsị aka abụọ.
Nke gara aga: Plastic ọgwụ igbe ọgwụ ịkpụzi
Osote: Igbe igbe plastic